Molluscum contagiosum - fitsaboana
Mazava ho azy fa tsy misy ifandraisany izany olana izany amin'ny fisian'ny shellfish marina. Raha ny marina, ny molluscum contagiosum dia aretina virosy izay mahakasika ny ankizy sy ny olon-dehibe. Ary ny anarana dia noho ny zava-misy fa ao amin'ny fanadihadiana laboratoara amin'ny antsipirihany momba ny votoatin'ny trondro miseho ao amin'ilay aretina, misy vatana boribory kely boribory (tsy velona) mazava ho azy. Ao amin'ny vondron'olona mety hampidi-doza dia olona manana ny tsy fahampian'ny hery. Ary mbola mahafantatra ny fomba hanaisotra ny molluscum contagiosum, dia tokony ho ny rehetra.
Fitsaboana nentim-paharazana amin'ny contagiosum molluscum amin'ny olon-dehibe
Noho izany, ny molluscum contagiosum dia fihenam-bidy. Ny pimples izay miseho ao amin'ilay aretina, dia mitovy amin'ny fiterahana kely. Mety hipoitra manerana ny vatana ny fipoahana, fa matetika no hita eo amin'ny hodi-kibo, ambany kibo, ao anaty kirany.
Raha azo atao ny manamarina fa ny organism dia misy fiantraikany amin'ny molluscum contagiosum mandritra ny fanadihadiana dia tsy ilaina ny manomboka ny fitsaboana avy hatrany. Ny zava-misy dia mandritra ny vanim-potoana semi-anio, ny organism dia afaka mandresy manokana ny aretina sy ny fahasitranana (izay mitranga matetika, izay matetika no ataon'ny manam-pahaizana).
Ny fitsaboana dia azo tendrena mba hampihena ny fizotran'ny fanarenana. Hatramin'izao, misy fomba maro mahomby hanasarahana ny molluscum contagiosum:
Voalohany, azo esorina ny nodules. Mazava ho azy fa tsy afaka manao izany amin'ny tenanao manokana ianao. Ny fitsaboana amin'ny fanesorana dia mety ho mpitsabo manokana fotsiny ao amin'ny hopitaly. Aorian'ny famafazana ny nodules, ny ratra vao noforonina dia raisina amin'ny vahaolana yodine.
Faharoa, azo atao ny mitandrina ireo pilina.
Raha misy fivalanana be loatra ao amin'ny vatana, dia azo inoana fa mila antibiôtika ianao. Matetika ny fitsaboana amin'ny molluscum contagiosum dia mampiasa fanafody toy ny tetracycline, metacycline ary ny hafa.
Mazava ho azy, azo atao ny mitondra ny molluscum contagiosum.
Ny fomba mahomby indrindra sy mahasoa dia voafidy aorian'ny fandinihana lalina. Maro ny toeram-pitsaboana maoderina manolotra fitsaboana homamiadana sy laser ny molluscum contagiosum. Ankoatr'izay fa tena mahomby ireo fomba ireo, dia lafo be ihany koa izy ireo, hany ka tsy afaka ny hamela azy ireo ny tsirairay.
Ho an'ny fikarakarana, dia misy menaka hafa mety ho mety, arakaraka ny toe-pahasalaman'ny marary sy ny fivoaran'ny aretina. Ireto ny fitaovana malaza sy mahomby indrindra:
Ny dipoavatra Interferon Alfa-2a dia misy fiantraikany mahery vaika. Manakana ny fiparitahan'ny sela izany ary misy fiantraikany amin'ny tsinay.
Manampy ny fampitomboana ny isan'ny antiviral agents ny Imiquimod .
Manala ny areti-mifindra ny Liniment ary misy vokany antiviral.
Matetika ny fitsaboana ny molekiolan'ny contagiosum oxoline. Ity fitaovana ity dia heverina ho mahomby sy tsy misy mampidi-doza. Iray amin'ireo tombony lehibe indrindra amin'ny fitsaboana amin'ity menaka ity ny fahafahana.
Ny molluscum contagiosum dia mitovy amin'ny taonjato maromaro. Ny solosaina dia nesorina aloha ary nofonosina tamin'ny sotro mahery. Aorian'izany dia nodorana sy nodiovina tamin'ny ahi-maitso ny lelany. Ny conjunctivitis sy blepharitis , miaraka amin'ny aretina, dia misaraka amin'ny tenany tsy misy fitsaboana fanampiny rehefa nesorina ireo nodules.
Fitsaboana ny contagiosum molluscum amin'ny fitsaboana folaka
Mazava ho azy, amin'ny fitsaboana amin'ny olona dia misy fitaovana maromaro izay hanampy amin'ny fiatrehana ny contagiosum molluscum tsy ratsy noho ny zava-mahadomelina dolara. Raha tianao ny hisafidy fomba fitsaboana ny nodules, dia azo ampiasaina ny ratra sotrokely ho an'ny fanasitranana aloha ny ratra.
Azo heverina fa mahomby ihany koa ny manasitrana molluscum contagiosum miaraka amin'ny chistol. Tena mampidi-doza io fomba io, satria heverina ho zavamaniry misy poizina ny sela, ka tokony ampiharina tsara. Ny cellule juice dia ampiharina amin'ny fako ary mampiroborobo ny fanesorana haingana azy ireo.
Inona avy ny hafanana tokony hitranga?
Ny ra ao am-bavany amin'ny maraina - ny antony
Ny fitevin'ny tsinay - ny antony sy ny fitsaboana fitevika
Ny renin'ny voaly - soritr'aretina sy fitsaboana
Phlegmon - fitsaboana
Fanadihadiana momba ny gripa H1N1
Ny sofina Produlo - ahoana no fomba fitondrany?
Nihena ny creatinine - ny antony
Fahasalamana - inona no tokony hatao?
Ahoana ny manoroka ny lelany?
Kisoa maina - fitsaboana ireo volkano
Nahoana no ilaina amin'ny tongolo ny tongolo lay?
Kofehy avy amin'ny volafotsy
Fehiny fohy 2014
Famolavolana ny fasan'ny trano
Top of chiffon
Sakafo ho an'ny zazavavy
Lamina Placenta anatin'ny 32 herinandro
Ladies watch Rado
Platform shoes 2013
Inona no atahorana trondro matavy?
Trombocytopenia - antony sy fitsaboana
Fahantrana amin'ny zaza - soritr'aretina sy fitsaboana
Akanjo manga eo amin'ny tany
Ahoana ny hanoratanao taratasy any amin'ny sekoly momba ny tsy fisian'ny zaza?
Ketraka ho an'ny sofa
Sakafo - tsara sy ratsy
Inona no atao hoe fifanarahana ary nahoana no ilaina izany?